Ma sax baa in xalka cudurka COVID-19 Soomaaliya uu yahay in uu ku dhaco 60% dadweynaha? | Somali Health
Home Faallooyin Ma sax baa in xalka cudurka COVID-19 Soomaaliya uu yahay in uu...
Ma sax baa in xalka cudurka COVID-19 Soomaaliya uu yahay in uu ku dhaco 60% dadweynaha?
Waxan baraha bulshada ku arkay video iyo qoraalo ku doodaya in xalka keli ah ee ay Soomaaliya kaga bixi karto dhibaatada cudurka safmarka ah ee COVID-19 uu yahay in uu ku dhaco 60% bulshada si loo gaaro difaac-meesi (herd immunity). Haddaba waxan halkan ku soo gudbinayaa aragtidayda waxa ka saxan ama ka khaldan dooddaas.
Ugu horrayn, erayga (herd immunity) oo aan af-Soomaali ahaan ku macneeyey “difaac-meesi” wuxuu ka tarjumayaa marka bulshadu ay yeelato difaac wadareed hoos u dhigaya faafidda cudur saf-mar ah. Maaha in gebi ahaanba cudurku tegayo balse faafiddiisa ayaa aad u yaraaneysa ilaa uu ka dabar go’o. Arrintan waxa ay ku qotontaa aragtida ah: si cudur u faafo waa in qof kasta oo cudurka qaba uu u gudbiyaa ugu yaraan hal qof oo cusub ama ka badan. Inta qof oo halkii xaalad ee cudurka ah u gudbin karto waxa la yiraahdaa “reproduction number” ama “tiro-taran”. Haddaba, si cudurka faafiddiisa hoos ugu dhacdo waa in tiro-tarankiisu ka hoos martaa 1 qof (waa in qofka cudurka qabaa uusan qaadsiin wax ka badan 1 qof celcelis), waxaana arrintaas marka la gaaro la yiraahdaa “herd immunity threshold” ama bilowga difaac-meesida.
Waa imisa difaac-meesi da loo baahanyahay in la gaaro si COVID-19 faafiddiisu ugu yaraato Soomaaliya?
Gaaridda difaac-meesidu waxay ku xiran tahay tiro-taranka cudurka. Tiro-taranka cudurkuna waxay ku xiran tahay hab nololeedka bulshada (social context). Daraasaddii ugu horreysey uguna faahfaahsanayd ee la xiriirta tiro-taran ka COVID-19 waxa laga sameeyey magaalada Wuhan ee dalka Shiinaha bishii labaad ee sannadkan. Waxana lagu qiyaasay in ay u dhaxaysey 2 ilaa 2.5. Taas macneheedu waa qofkasta celcelis wuxu cudurka qaadsiiyey 2 ilaa 2.5 qof (xisaab ahaan).
Bilowga difaac-meesida waxaa lagu helaa qaacido ah 1 – 1/R0, iyada oo R0 ay u taagantahay tiro-taran. Sidaas daraadeed, bilowga difaac-meesida Wuhan waxa lagu gaari karey 1 –½ ilaa 1 – ½.5 oo la mid ah 50% ilaa 60%. Waa meesha ay ka timid hadal haynta ah in uu ku dhaco 60% bulshada.
Soomaaliya iyo Wuhan maxay ku kala duwan yihiin?
Marka la xisaabinayo tiro-taranka cudurka, waxaa laga tixraacaa tirada dadka isku guriga ku nool ee cudurka is qaadsiiya (household contacts). Dalka shiinaha waxaa celcelis gurigiiba ku wada nool dad aan ka badnayn 3 ama 4 qof, halka Soomaaliya celcelis qoysasku ka badan yihiin 6 xubnood ayna yihiin dad is booqda oo aad isu dhexgala. Taas macneheedu waa haddii qofka Wuhan ku nool ee qoys 3 qof ka kooban uu celcelis 2 kamid ah cudurka qaadsiiyey, qofka Soomaaliga ah ee qoyskiisu ka kooban yahay 6 qof wuxu qaadsiin karaa 4 ama 5 qof ugu yaraan.
Maxay noqon kartaa difaac-meesi da Soomaaliya u baahan tahay?
Marka qaacidada kore loo isticmaalo, difaac-meesida Soomaaliya u baahan tahay waxa ay noqoneysaa 1 – 1/4 ilaa 1 – 1/5 oo noqoneysaa 75% ilaa 80%. Macnuhu waa in cudurku ku dhaco ugu yaraan 80% bulshada si uu u BILAABO in uu dabar go’o.
Fiiro gaar ah. Difaac-meesidu waxay wax ka tartaa cudurka haddii qof kasta oo uu ku dhaco ee ka bogsada jirkiisu ka samaysan karo difaac raaga. Cudurka COVID-19 in qofka uu ku reebi karo difaac muddo dheer ah weli khubarada caafimaadku ma xaqiijin.
Previous articleIsbitaalka De Martiini oo loo magacaabay Agaasime cusub
Next articleWaa maxay Karantiil iyo soocid “isolation” iyo sida saxda ah ee loo dhaqan gelin karo waqtiga COVID-19